निगरानी विशेष सबै
'घरबहाल करकाे अडानबाट पछि हटेका हाेइनाैं, नगरवासीलार्इ चिढ्याउन नचाहेका हाै‌ं'
संविधानले तोकेको असंख्य अधिकारसहितको स्वायत्त स्थानीय तहको अभ्यास हुँदै गर्दा जनताबाट प्रत्यक्ष रुपमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले हिजोको स्थानीय निकायले दिँदै आएका सेवा सुविधाका हकमा कस्ता सुधारहरु हासिल गरे र संविधानले दिएका असंख्य थप अधिकारहरुको प्राप्ति र कार्यान्वयनमा कहाँ कसरी अघि बढिरहेका छन् भन्ने आम चासोको विषय हो । संविधानले दिएका त्यस्ता अधिकारहरुको प्राप्ति तथा कार्यान्वयनमा अहिलेको नेतृत्वको शैली र कार्यसम्पादन भोलिको नेतृत्वका लागि नजीर बन्न सक्छ । आजको नेतृत्वको सफलता वा असफलता भावी नेतृत्वको सफलता वा असफलताको कारक समेत हुन जान्छ...
टेलिकमको एसएमएस तीनदिनसम्म निःशुल्क
काठमाडौं । भुकम्पको समयमा निशुल्क टेलिफोन सेवा प्रदान गरेको नेपाल टेलिकमले तारई क्षेत्रमा आएको बाढीको विपत्तिमा फेरि अर्को जनप्रिय निर्णय गरेको छ । टेलिकमले बाढीको सूचना आदानप्रदान गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले तीन दिनसम्म नेपाल टेलिकमका मोवाइलहरुमा एसएमएस सुविधा निःशुल्क गरेको छ । ...
पुँजीवृद्धिको सिधा असर ठुला बैंकमा, ८ ठुला बैंकको इपीएसमा दोहोरो अंकको गिरावट, साख जोगाउनै हम्मे
अब शेयर बाँडफाँडमा ‘हेड काउण्ट’, ५० कित्ता लगानीमै उच्च लाभ, भोलिदेखि यसरी गरिन्छ धितोपत्रको बाँडफाँड
आफ्नै सवारीले लाइसेन्सको ट्रायल दिन सकिने, ५०० भन्दा बढी शुल्क पनि नलाग्ने
काठमाडाैं । सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको सवारीमा ट्रायल दिने व्यवस्था हट्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै आफ्नै सवारीमा प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाउने व्यवस्थ ागर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई आदेश दिएको छ । साथै यातायात व्यवस्थासम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख भएको ५०० रुपैंया भन्दा बढी शुल्क नलिन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । अहिले फारामकाे २०० रुपैंंया तथा लार्इसेन्स निकाल्न ७०० रुपै‌ंयादेखि बढी शुल्क लिइदै अाइएकाे छ । त्यस्तै ट्रायलमा सवारीबापत मोटरसाइकललाई ८२ रुपैंया, सानो गाडीलाई ९२...
कृषि प्रयोजनको गाडीमा छुट्टै नम्बरप्लेट, कृषकलाई सुरक्षा भत्ता र पेन्सन
काठमाडौं । कृषि विकास मन्त्रालयको मार्गचित्र तयार भएको छ । मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको हो । यो प्रतिवेदन केही दिनभित्रै सार्वजनिक हुने बताइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य प्रतिवेदनले राखेको छ । उक्त प्रतिवेदन केही दिनमै सार्वजनिक हुने बताइएको छ । उक्त मार्गचित्रले कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकीकरणका लागि कृषि संयन्त्रमा व्यापक अनुदान, कृषकहरुको लागि सुरक्षा भत्ता तथा सेन्सनको समेत व्यवस्था गरेको छ । कृषि प्रयोजनका लगि प्रयोग हुने गाडीको छुट्टै नम्बरप्लेट...
प्राधिकरणका ठूला विद्युत गृहको उत्पादन शतप्रतिशत भन्दा बढी
काठमाडौं । निर्माण सम्पन्न भएका जलविद्युत कम्पनीहरुले शतप्रतिशत भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको ती ठूला विद्युत गृहहरुले लक्ष्य भन्दा बढी अर्थात् शतप्रतिशत भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरेका हुन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४ सय ६५ मेगावाट बराबरको १६ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको छ । यस मध्ये सबैभन्दा ठूलो कालीगण्डकी हो भने दोस्रो मध्य मस्र्याङ्दी हो । जुन ७० मेगावाट र तेस्रो मस्र्याङ्दी ६९ मेगावाटको रहेको कारोबार दैनिकमा समाचार छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३ ७४मा यी तीन वटै कम्पनीले लक्ष्यभन्दा बढी विद्युत...
सहकारी विभागको अधिकार राष्ट्रबैंकलाई बुझाउने विधेयक ल्याईँदै
काठमाडौं । ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने ठूला सहकारीहरुलाई राष्ट्रबैक मार्फत् अनुगमन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सहकारीको अनुगमनलाइै प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनको लागि सम्बन्धित कानून संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०३७मा तोकिएको रकम भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई राष्ट्रबैंकमार्फत् अनुगमन गर्न प्रस्ताव गरिएको समाचार सोमबारको कारोबार दैनिकमा छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा ५० करोडको सीमा तोकेर सो भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीहरु राष्ट्रबैंकको मातहतमा रहने प्रस्ताव गरिएको हो । बैंक सरहको कारोबार गर्ने सहकारीहरुमाथि...
FUN FUNNY सबै
५ रुपैंया प्वाइन्टका लागि पाँच जना मुख्य र दुइ जना बैकल्पिकलाइ २०७४ काे सप्तमीदेखि कोजाग्रतको भोलिपल्टसम्मको लागि भर्ना खुलेको छ । सीट सिमित छ चाँडै सम्पर्क गर्नुहोला । दरखास्त दिने अन्तिम मिति घटस्थापनाको दिन कार्यालय समय भित्र । सर्तहरु: १. बिहानको खाना आफैं बन्दोबस्त गरी आउने, दिउँसो लालचिया र एकमाना चिउराको व्यवस्था हुनेछ २. सो गर्नेले एक प्वाइन्ट प्लस गर्नुपर्नेछ । ३. नियमित हाजिर नहुने र ढीलो आउनेले बैकल्पिकमा इमान्दारीपूर्वक हात नटेकी, लोदर नलगाइ र नसिकाइ बस्नुपर्ने छ । ४. मुख्य उम्मेद्वार टाँट पल्टेमा वा घरबाट किचकिच गरि मोबाइल बजि राखेको खण्डमा...
काठमाडौं । पहिला तेलको खुब चर्चा भयो । जमाना उल्टिनै लागेको थिया, धन्न बाँचियो । मानसरोबरमाथिबाट हिउँ पग्लेर त के आउँछ र ? तेल त्योभन्दा बढी तेल हिमालबाटै आउने भएपछि त्यो तातो मरुभूमिमा काम गरिरहेका नेपालीलाई के नै नै चाहियो र ? ३ बर्ष मरुभूमिमा पसिना बगाउने अनि तीन महिना हिमालको तेलले नेपालमा गाडी गुडाउने गरे भैहाल्यो तर त्यो कहाँ रोकियो थाहा छैन, कतै मानसरोबरमा परेको भ्वानले त्यो तेल भारतलिरै पो पुर्यायो कि ! जेहोस अहिले त्यो भ्वान टालिँदै छ अरे । चीनबाट आएको अर्को कुरा अर्थात् रेलपनि धेरै पो भइसक्यो त सिगात्सेबाट हिँडेको खै मरे देखिएको होइन ! हुन त काठमाडौंमा एक...
पुलको शिलान्यासमा रक्षामन्त्री, अब देशको सुरक्षाको जिम्मा भौतिक मन्त्रालयले हेर्ने ? देशको कामकाज सही ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि २ दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालय खडा गरिएका छन् र हरेक मन्त्रालयमा १, २ वा ३ जना मन्त्री(मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीसमेत)को कोटा पनि छुट्याइएको छ । हाल नेपाली काँग्रेसको भागमा परेको छ परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय । परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा अमेरिकी पीएचडीधारी डा. प्रकाशशरण महत छन् भने रक्षाको भाग बालकृष्ण खाँडले पाएका छन् । सामान्य जनताको बुझाइ के हो भने परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यसका मन्त्रीले कुटनीतिक कार्य गर्ने हो तर...
दाह्री पाल्नेहरु छिटाे बुढाे नहुने, क्यान्सर हुने सम्भावना समेत कम हुने
हालै गरिएको एक अध्ययनले दाह्री पाल्नु स्वास्थ्यको लगि निकै लाभदायक हुने देखाएको छ । दाह्री पाल्नुका फाइदाहरुबार क्विन्सल्याण्ड विश्वविद्यालयमा हालै एक अनुसन्धान गरिएके थियो । उक्त अध्ययनअनुसार दाह्रीवाला मानिसहरु परावैजनी विकिरण वा अल्ट्रा भाइलेट रेबाट सुरक्षित हुने देखाएको थियो । दाह्रीका कारण छालाको क्यान्सर हुने सम्भावना कम हुने सम्भावना कम हुने अनुसन्धानकर्ताबाट पुष्टि भएको छ । दाह्रीले परावैजनी विकिरणबाट मानिसलाई सुरक्षित राख्ने अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् । यसले गर्दा छालाको क्यान्सरबाट बच्न सक्ने भनाई छ । साथै बुढो हुने प्रक्रिया पनि सुस्त...
बजारमा चलायमान रहँदा धेरै तहबाट फार्इदा हासिल गर्न सकिन्छ । लगानीको निर्णयको बाबजुद, त्यहाँ कति लगानी गर्न, लगानी कसरी गर्ने भन्ने राम्रो बिन्दु तपार्इंले कसरी पाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्न हो। धेरै युवा लगानीकर्ताहरूले सम्भावित कम्पनीको '४०१ के' योजनाका लागि रोजगारी गर्नेछन्, ब्रोकरेज खाता खोल्ने अर्को विकल्प हो। तपार्इं जुनसुकै व्यवसाय गर्नुहेस्, यदि तपाईं त्यो व्यापारको सही मार्ग तपार्इं जान्नुहुन्छ भने त्यो नै सफलताको संकेत हो । बजारमा कारोबार गर्दा विचार गर्नुपर्ने केही यस्ता सुत्रहरु जान्नुहोस् जसले तपार्इंलार्इ शेयर बजारमा सफल बनाउँछ र...
नाम एक फाइदा अनेक पिपलको रुखको, कुन कुन रोगको उपचार छ पिपलसँग ?
काठमाडौं । पीपल आफ्नो घना छायाका कारण ताजा प्राणवायुका लागि एकदमै उपयुक्त मानिन्छ स तर के तपाईलाई थाहा छ ? यो आफ्नो छायाका कारण र शितलता प्रदान गर्नको लागि मात्रै होईन मानव शरीरका लागि पनि प्रभावकारी मानिन्छ । हेनएुहोस् पिपलको १३ फाईदाहरु बुँदागत रुपमा । सास सम्बन्धी समस्या सास सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि पिपलको रुख हाम्रोलागि एकदमै फाईदाजनक रहेकोे छ । पिपलको बोक्रा निकालेर त्यसको भित्री भागलाई चूर्ण बनाई खानेहो भने सास सम्बन्धी समस्या दूर हुने बैज्ञानिक मान्यता रहेको छ । यसको पातलाई धुलो बनाएर दूधमा हालेर खाने हो भनेपनि यसले दमको रोग निको...
आफ्नो लगानीलाई जोखिममुक्त बनाउनेबारे सोच्नुभएको छ ? यी सुझावहरु उपयोगी हुनसक्छ
विश्वमै पुँजीबजारलाई सबैभन्दा लाभप्रद र सबैभन्दा ‘रिस्की’ लगानीको क्षेत्र पनि मानिन्छ । यस क्षेत्रमा बुझेर लगानी गर्नेहरुले छाटै समयमा आफूलाई विश्वबजारमै स्थापित गराएका छन् भने बहकावमा, लहलहैमा वा अर्को कसैले कमाएको देखेर बुझ्दै नबुझी हाम फाल्नेहरु रातारात भिखारी समेत भएका छन् । शेयर बजार लगानीकर्ताहरुको खेल्ने ठाउँ पनि हो । तसर्थ एउटा कुरा ध्यान दिनु जरुरी के छ भने खेलमा एउटा पक्षले जित्छ भने अवश्य, त्यहाँ अर्को पक्षले हार्नै पर्ने हुन्छ । यही हारजितको खेल हो शेयर लगानी । जो यस क्षेत्रका बारेमा सचेत छन् र प्रतिबद्ध छन्, जित सधैँ उनीहरुको पोल्टामा...
हकप्रद र बाेनस सेयरकाे बाढीमा कसरी छान्ने उत्कृष्ट कम्पनी ? हेर्नुहाेस्, शेयर किन्दा बिर्सनै नहुने यी ६ सुत्र
स्थिर वा बढोत्तरी लाभांशले कम्पनीको नगद प्रवाह राम्रो छ र यसको प्रतिफल भविष्यमा राम्रो हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउँछ । कतिपय कम्पनीले प्रतिशेयर आम्दानी बढी नै गरे पनि लाभांश वितरणमा कञ्जुस्यार्इँ गर्ने गरेको देखिन्छ । अहिले बजारमा बाेनस र हकप्रद शेयरकाे बाढी नै अाएकाे छ । बाेनस र हकप्रद शेयर घाेषणाकै अाधारमा लगानीकर्ताहरु हतारिएर लगानी गर्न हाम फाल्ने प्रवृत्ति बढ्दाे छ । तर के धेरै हकप्रद दिने कम्पनीले धेरै प्रतिफल दिने ग्यारेन्टी हुँदैन । तपाईँले कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा पहिला समगं शेयर बजार र आफूले लगानी गर्न चाहेको कम्पनीको बारेमा...
कोरियन भाषा परीक्षामा १२ हजार पास, पास भए जान पाउने ग्यारेन्टी भने नहुने
काठमाडौँ । ईपीएस प्रणाली गत जेठ २७ र २८ गते लिइएको कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको छ । ईपिएस कोरियन शाखाले म‌गलबार नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । ईपिएस कोरियन शाखाका प्रमुख बाबुराम खतिवडाले दिएको जानकारी अनुसार १२ हजार १०८ परीक्षार्थी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सफल भएका छन् । अघिल्लो बर्ष उक्त संख्या करिब मात्र थियो । खतिवडाका अनुसार कृषितर्फ करिब साढे सात हजार परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। शाखाले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष भन्डै तीनगुणा बढीको नाम निकालेको छ । भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण सबै कोरिया जान पाउने कुनै ग्यारेन्टी नभएको पनि शाखाले जनाएको छ...